को’रोनाको सं’कटसँग लड्न आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री चिकित्सक पेशामा फर्किने…यस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को’रोनाको सं’कटसँग लड्न आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री चिकित्सक पेशामा फर्किने…यस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री !
को’रोनाको सं’कटसँग लड्न आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री चिकित्सक पेशामा फर्किने…यस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री !
आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री लियो वरा’डकर को’रोना भाइ’रसको स’ङ्कटसँग लड्न मेडिकल पेशामा पुनः फ’र्किने भएछन्। भारतीय मूलका लियो राजनीतिमा स’क्रिय हुनुअघि चि’कित्सक थिए ।